मलेसियाबाट २४ वटा शव ल्याएपछि क्याप्टेन लामाको प्रश्न : यो देश धनी र ठूलाबडाको मात्रै हो ? - chiyagaff
माघ १, २०७८ माघ १, २०७८ Chiya GaffLeaveaComment on मलेसियाबाट २४ वटा शव ल्याएपछि क्याप्टेन लामाको प्रश्न : यो देश धनी र ठूलाबडाको मात्रै हो ?
नेपाल वायु सेवा निगमका वरिष्ठ पाइलट विजय लामाले आज मलेसियाबाट एयरबस वाइडबडी जहाजमार्फत नेपाली युवाको २४ वटा शव र तीनवटा अस्तु लिएर फर्किए। यसअघि उनैले १७ जुलाईमा १२ वटा र २१ जुलाईमा एक नेपालीको शव लिएर आएका थिए।
उनी नेतृत्वको नेवानि जहाजले एक सातामै ३७ वटा शव नेपाल ल्याएको छ। मलेसियामा ज्यान गुमाएका नेपाली युवा युवती मध्ये अझै १८ जनाको शव ल्याउन बाँकी रहेको उनले बताएका छन्।
‘मनमा धेरै दु:ख लाग्दा लाग्दै पनि बाध्य छौँ शव ल्याउनलाई’, उनले भनेका छन्, ‘देशको स्थिति नै यस्तै छ । धनी र ठूलाबडाहरूलाई मात्रै हो त यो देश कि सबैलाई हो ?
उनी नेतृत्वको चालक दलले मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अन्य नेपालीलाई पनि ल्याए। घर फर्किन लागेका नेपाली देख्दा उनको मन रमायो। तर कयौँ शव पनि ल्याउनुपर्दा उनको मन कुँडिएको छ। आज नेवानिको आरए ४१६ उडानमार्फत २४ शव ल्याएपछि पाइलट लामाले यस्तो काम गर्नै नपरे मनले शान्ति पाउने टिप्पणी गरेका छन्।
‘विदेशमा श्रम र पसिना बेच्न गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको शव ल्याउँदा जस्तो दुख पीडा अरु कुनै पनि उडान गर्दा हुन्न’, उनले भनेका छन्, ‘तथ्यांकमा मात्रै सीमित हुने त होला देश र सरकारको निम्ति यी शवहरु। मृतक र उनका आश्रित परिवारको सर्वस्व गुमेको छ।’
उनले देशलाई बर्बाद पार्दै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई विदेश जान बाध्य पारेकोमा राजनीतिक नेतृत्वसँग आक्रोश पोखेका छन्। ‘अब पनि पुगेन देशलाई बरबाद पार्दै नेपाली जनतालाई विदेश जान बाध्य बनाउने गरि एकआपसमा झगडा गर्न?’, लामाले सोधेका छन्, ‘यति देखेपछि त केही गर्नु नि देश र जनताका लागि ! आफ्नो अनि पार्टीको स्वार्थ भन्दामाथि उठ्न सकिन्न र?’
नेपालीलाई खुल्यो Russian Army मा भर्ति !
नेपालीको लागि कतारले यात्रा नीति परिवर्तन गरेको छैन, के के डकुमेन्ट चाहिन्छ ?
मंसिर १५, २०७८ मंसिर १५, २०७८ Chiya Gaff
यूएईमा भूकम्पको धक्का
कार्तिक २८, २०७८ कार्तिक २८, २०७८ Chiya Gaff